Prof Geedi oo safar gaaban ugu ambabaxay magaalada Nairobi
Buluugley, Sunday, October 09, 2005
Prof. Cali Maxamed Geedi ayaa safar lama filaan ah uga ambabaxay magaalada Jowhar ee xatunta u ah garabka taageersan Col. Cabdullahi Yusuf, waxaana la xaqiijiyey inuu gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Wararka ka imaanaya degmada Jowhar ayaa waxey sheegayaan in safarka prof. Geedi uu yahay mid gaaban oo qaadanaya mudo labo maalmooda, ujeedada rasmiga ah ee socdaalkiisana ayaa lagu sheegay iney tahay in garabka Jowhar ay wakiilka QM u qaabilsan arrimaha Soomaliiya ay kawada hadlaan warbixintii ka soo baxday QM oo garabka jowhar ku tilmaamay kooxda ugu badan ee hub dibeda ka soo gadatay.
Garabka Jowhar ayaa cabsi badan ka muujiyey waxyeelada ka soo gaari karta warbixinta Qaramada Midoobey ay ku eedeysey hubka ay sida sharcidarada ah ay ugu soo daldaleen gudaha Soomaaliya. Prof. Geedi iyo dadka ku fekerkaa ee xaruunta ka dhigtay Jowhar ayaa hanti badan oo deyna waxey ku soo qaateen qalabka ciidanka, kuwaas oo ka kala yimid Yemen iyo Itoobiya.
Deeqbixiyeyaasha ayaa iyaguna ka gaabsaday codsiyadii dhaqaale ee uga imaanayey garabka Jowhar, iyagoo cabsi ka qaba in lacagaha deeqda loo adeegsado in lagu bixiyo qaanta ay ku soo galeen hubka ku soo qulqulaya Jowhar.
Wasiirada ka soo jeeda Gobolka Bari oo xaruuntooda siyaasadeed ka dhigtay degmada Jowhar ayaa hantidooda waxey ku bixiyeen hub ay ka soo gateen wadamada suuqa madow hubka ku iibiya iyagoo arrintaas u sii maray dalaaliin talyaniya iyo kuwa ku xiran maafiyada wadamadii hore ee reer Bariga.
Hubkaas oo inta badan lagu soo hagaajiyo dekedaha Emeraadka, kadibna doonyo loogu soo gubiyo Bossaaso ayaa dhinaca circa iyo dhulka Soomaalida Galbeed waxaa lagu soo gaarsiiya degmada Jowhar oo wasiiradaas ay ku leeyihiin maleeshiyooyin hubeysan.
Waxaa la filayaa in Prof. Geedi uu codsado inuu la kulmo Shariif Xasan oo hadda soo gaaray Nairobi. Arrinkaas oo ay uga dan leeyihiin garabka Jowhar iney ku muujiyaan ineysan dagaal isku diyaarineyn laakiin ay hubka u soo gateen iney naftooda ku difaacaan, diyaarna ay u yihiin nabada.
Waxey Soomaalida inteeda badan ay ka dheregsan tahay in khilaaf xoogan uu dhexyaalo Col. Cabdullahi iyo Shariifka. Ma jirto sabab uu Prof. Geedi u soo dhexgalo khilaaf aan isaga toos u quseyn. Kulunka prof. Geedi uu ku doonayo inuu ku arko Shariifka ayaa loo macneystay in garabka Jowhar ay doonayaan iney helaan xogta safaradii shariifka inta aysan taas soo gaarin garabka Muqdisho, si xogta laga helo loogu xoojiyo warbixin garabka Muqdisho looga diyaarinayo magaalda Addis Sababa,taas oo xog uruurin lala xiriirinayo garabkaas argagixisada ka jirta Soomaliya si taas ay qiil ugu noqoto dulaan huwana oo lagu qaado magaalda Muqdisho.
Waxaa la helay warar sheegaya in Prof. Geedi looga yeeray Itoobiya laguna amaray inuu soo maro Nairobi. Ma cada in sababta loogu yeeray ay la xiriirto gadoodka Maxamed Dheere iyo iney tahay mashruuca argagixisada ay Itoobiya dooneyso iney ku soo jiidato ra’yiga addunka, gaar ahaan dalka Mareykanka.